Gbasara Anyị - OMG Solutions
Ozi 8 News Singapore (27 Aug 2017)
Ihe OMG - Anyị na-enye ọtụtụ ihe ọgbara ọhụrụ na teknụzụ dịka mgbochi ọdịda, nsogbu mberede / nsogbu, GPS trackers na ese foto nchekwa. Ndị nlekọta na-elekọta ndị na-elekọta ha belata nhụjuanya anụ ahụ na nke mmetụta uche ha na-esite n'ọchịchọ nke ilekọta ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ ndị agadi.
vCare Smart Home Nche System WiFi / 3G
vCare bụ usoro mkpuchi nche maka ndị agadi, n'ụlọ. Usoro a na-enye ngwakọta nke ojiji, gụnyere nchebe ụlọ, ụdị ndụ dị mma na ilekọta ndị agadi. Ọ na - eji netwọk abụọ (WiFi na GSM / 3G ma ọ bụ 4G) kesaa ozi iji kpalite mkpu - usoro dị mfe, nchekwa na ngwa ngwa.
Ma ị nọ n’ọfịs ma ọ bụ njem njem esenidụt, vCare nọnyeere gị. Nwere ike ịmara ọnọdụ nke sistemụ mkpu smart gị, nyochaa ụlọ gị ma lekọta ndị mụrụ gị. Ọ ga-ekwe omume ịlele iru mmiri na ọkwa okpomọkụ nke ụlọ (ma n'ime ma n'èzí). Site na vCare, enwere ike ijide n'aka na nchekwa na nchekwa gị.
Na-egbochi ọdịda & nchịkọta dị mfe nke ndị agadi
Mgbochi Mgbochi nke Mgbochi Eji mkpuchi dị mfe iji: Jikọọ akwa ihe mgbochi akwa, ihe mgbochi oche, ma ọ bụ ala mposi na nyocha mgbochi ọdịda. Mgbe ahụ dozie mpempe akwa na-echekwa ihe dị n'elu ihe ndina ma ọ bụ oche, n'okpuru onye obibi nke nwere nsogbu ịda ma ọ bụ na-awagharị. A na-eji akwa ma ọ bụ ọnụ ụzọ eleba anya na-etinye ihe ndina ala. Mgbe onye obibi na-agbalị ibili, a na-ewepụ nrụgide site na akwa ma ọ bụ akwa oche ma ọ bụ tinye ya na ngwongwo ala, nke na-agwa onye na-elekọta ya site na mkpọtụ olu, udo pager, mkpugharị hallway, ìhè oku mberede, ma ọ bụ ihe nlekota anya ka ha nwee ike nye aka mgbe achọrọ.
Dementia / Agadi / Kidsmụaka GPS Tracker & Fall Detector
Nzuzo 74612 22 Echiche Taa